AMISOM oo sheegtay inay baareyso dad rayid ah oo shalay lagu laayay deegaanka Leego – idalenews.com
AMISOM ayaa sheegtay inay baaritaan ku sameyneyso fal shalay Ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM ka geysteen deegaanka Leego, kaasoo ay dad rayid ah ku xasuuqeen.
Afhayeen u hadlay AMISOM ayaa sheegay inay ka war qabaan dhacdada ay dadka rayidka wax ku noqdeen, hase ahaatee ay baaritaan ku sameyn doonaan.
“Goobta waxaa ka dhacay dagaal dhex maray AMISOM iyo Shabaab, waa ka war qabnaa in dad rayid ah ay wax ku noqdeen waa xajiineynaynaa sida ay wax u dhaceen”ayuu yiri Afhayeenkan oo la hadlay Idaacada Kulmiye.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in marka ay dhacaan xaaladahan oo kale ay baaritaan iyo xog uruurin sameeyaan, isla markaana kadib ay ka soo saaraan war cad ah, isagoo xusay inay qaadi doonaan tallaabada ku haboon dhacdadaas.
Maalintii shalay ayay aheyd markii Ciidamada AMISOM ay ku dileen deegaanka Leego ilaa sideed ruux oo xoolo dhaqato ahaa, waxaana saddex ka mid ah ay ahaayeen Haween, waxaana ku dhaawacmay ilaa sagaal kale.
Dhaawacyada ayaa loo soo qaaday magaalada Muqdisho, kuwaasoo xaaladooda aad looga deyrinayo, waxaana dhacdadan cambaareeyay Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya.
Ma ahan markii u horeysay ee Ciidamada AMISOM ay waxyeelo u geystaan dad rayid ah, iyadoo dhacdadan ay noqoneyso tii u horeysay ee sanadka ka dhacda gobolka Shabellaha Hoose.
Maxkamada Ciidamada qalabka sida oo saaka xukuno dil ku fulisay askar geysatay fal kufsi iyo dil